« Carnaval de Madagascar » : hihatsara kokoa ny diabe isan’andro | NewsMada
« Carnaval de Madagascar » : hihatsara kokoa ny diabe isan’andro
Par Taratra sur 13/06/2017
Toy ny isan-taona, rehefa ankatoky ny fetin’ny Fahaleovantena, hifamotoana eto an-dRenivohitra ny avy amin’ny faritra 22, haneho ny maha izy azy ny tsirairay, amin’ny lafiny rehetra, sy ny firaisankinan’ny Malagasy. Ny « Carnaval de Madagascar » no tian-kambara eto.
Hotanterahina ny 16, 17, 18 jona izao ny andiany fahatelo. Hatao eo anoloan’ny Araben’ny Fahaleovantena ny hetsika rehetra. Ao anatin’izany ny « Tsenaben’ny faritra », kilalao isan-karazany, sakafo mampiavaka ny faritra tsirairay. Tsy hadino ny fampisehoana rindran-kira sy mozika. Ny lehibe indrindra, amin’ny maha « carnaval » azy, ny diabe arahim-panentanana sy fihetsiketsehana na « grande parade ». Nohavaozina sy nohatsaraina kokoa ny ho fizotr’ity hetsika iray ity, araka ny fanazavan’ny avy amin’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), mpikarakara.
Ho an’ny rafitra sy fikambanana ary sekoly samihafa maniry handray anjara amin’ny « grande parade », tokony hanaraka ny lohahevitra hoe « Ny fanajana ny tontolo iainana » ny fitafy sy ny haingo entin’izy ireo. Entanina kosa ny solontena isam-paritra mba hanome lanja ny kolontsaina sy ireo zavatra mahasarika mpizahatany misy any aminy avy. Hisy ny loka homena izay mendrika indrindra amin’ireo mpandray anjara amin’ny diabe.
Noho ireo hetsika samihafa ireo, hisy fandrindrana ny fifamoivoizana manoloana ny Garan’i Soarano, rehefa mandalo ny mpanao « carnaval ». Ho tapaka ny lalana eo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, araka ny fanazavan’ny Ortana. Ho hentitra kokoa ny fiahiana ny fandriampahalemana manodidina an’Analakely, mandritra ny « Carnaval de Madagascar ».